Nahoana ny Katolika Mivavaka Amin'ny Olo-masina? – 2trondro
Home / Fiangonana / Olo-masina / Nahoana ny Katolika Mivavaka Amin'ny Olo-masina?
Misy mitsikera ny Katolika ho mivavaka ny Olo-masina, fa tsy mivantana ho an'Andriamanitra.
Raha ny marina, Katolika matetika mivavaka mivantana amin'Andriamanitra, fa afaka ihany koa ny manontany ny olona masina–na iza na iza any an-danitra–mba hivavaka amin'Andriamanitra ho azy.
Noho izany, raha olona mivavaka ny Saint ankapobeny dia mangataka ny Saint hanao fifonana ho azy–mba hivavaka ho azy sy niaraka taminy ho an'Andriamanitra. Ny Kristianina rehetra hanao toy izany koa indrindra rehefa manontany mpiray finoana eto an-tany mba hivavaka ho azy ireo, na dia hisy manantena fa ny vavaky ny Olomasina mba ho mahery kokoa satria mijanona tanteraka nohamasinina eo anatrehan'Andriamanitra (jereo Ny Taratasin'i Saint James, 5:16).1
Jesosy, sady koa anie, Nampianatra antsika fa Andriamanitra dia "tsy Andriamanitry ny maty, fa an'ny velona " (Luke 20:38). Tamin'ny fiovan-tarehy, Dia niresaka tamin'ny ela-maty Elia sy Mosesy teo anatrehan'ny Apostoly (Mark 9:3). Nampanantena ihany koa izy ny jiolahy (fomba amam-panao izay miantso Saint Dismas) fa hiaraka Aminy ao amin'ny Paradisa izay andro indrindra (Luke 23:43).
Ao amin'ny Testamenta Vaovao, Jesosy manafaka ny ohabolana eo izay ny olona any Hadesy mangataka ny fanelanelanana ny olona ao an-tratran'ny 'i Abrahama noho ny rahalahiny eto an-tany (Luke 16:19).
Jesosy koa dia miresaka momba ny fanelanelanana ny anjely, nanao hoe:, "Jereo fa tsy tsinontsinona ny iray amin'ireny madinika ireny; Fa lazaiko aminareo fa ny anjeliny any an-danitra mahita mandrakariva ny tavan'ny Raiko Izay any an-danitra " (jereo Matthew 18:10; ny Bokin'ny Salamo 91:11-12; ary ny Bokin'ny Apokalypsy 8:3-4).
Tao amin'ny Taratasy ho an'ny Kolosianina, I Paoly manoratra fa mpino eto an-tany no fahaizana Andriamanitra "mba anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava" (1:12).
The Taratasy ho an'ny Hebrio dia manondro ny lehilahy sy ny vehivavy masina ao amin'ny Fanekem-pihavanana Taloha ho lehibe "rahona ny vavolombelona" manodidina antsika amin'ny 12:1 ka maharitra amin'ny andininy 12:22 – 23 amin'ny, "Fa ianareo kosa efa mby eo an-tendrombohitra Ziona sy any an-tanànan 'ilay Andriamanitra velona, ny any an-danitra ho tsy tambo isaina Jerusalemand anjely in fety fanangonana, ary ny fiangonana, dia ny lahimatoa izay voasoratra any an-danitra, ary ny mpitsara, izay no Andriamanitry ny rehetra, ary amin'ny fanahin'ny olona marina izay efa natao tanteraka. "
ao amin'ny Bokin'ny Apokalypsy, maritiora ny masina mitsangana eo anatrehan'Andriamanitra, nitaraina taminy ny rariny amin'ny anaran'ny enjehina eto an-tany (6:9-11), sy ny Apôstôly sy ny mpaminany handohalika eo anatrehan'i seza fiandrianan'Andriamanitra any an-danitra, ary manolotra ny vavaky ny mahatoky Azy teto an-tany: "Lovia volamena feno ditin-kazo manitra, dia vavaka ataon'ny olona masina " (5:8, 4:4 ary 20:4). (Mariho fa ny eto an-tany dia matetika mahatoky resahina ao amin'ny Testamenta Vaovao ho toy ny "olo-masina." Tsy ny soso-kevitra izy ireo no efa tanteraka nohamasinina, fa izy ireo ao amin'ny dingan'ny hamasinina. Ohatra, Mampirisika ny Efesianina i Paoly, izay aloha adiresy toy ny "olona masina izay ihany koa ny mahatoky ao amin'i Kristy Jesosy,"Mba hiala amin'ny fitondran-tena feno fahotana (hahita ny taratasiny ho an'ny Efesianina, 1:1 ary 4:22-23).)
Tamin'ny voalohany ny Fivavahana Kristianina ny asa soratra ara-tantara toy izany koa isika mandray fijoroana ho vavolombelona. Pope Saint Clement (D. toy ny. 97), ohatra, Nanoro hevitra ny Kristianina ny, "Araho ny olona masina, ho an'ireo izay manaraka azy dia ho hamasinina " (Taratasy ho An'ny Korintianina 46:2; cf. Asaivo. 13:7).
Tamin'ny momba ny taona 156, izay mahatoky ao amin'i Smyrna dia nanazava fa nivavaka i Jesoa Kristy izy ireo, fa tia ny maritiora "toy ny mpianatra sy hanahaka ny Tompo, rehefa mendrika, noho ny tsy manan-tsahala ny fanoloran-tena ho mpanjaka sy Mpampianatra. Enga anie isika koa ho tonga ny mpiara-miasa sy ny mpiara-mpianatra!" (Maritiora ny Saint Polcycarp 17:3; ).
Tamin'ny fiandohan'ny taonjato fahatelo, Saint Clément avy any Aleksandria nanamarika ny fomba Kristianina marina "mivavaka ao amin'ny fiaraha-monina ny anjely, toy ny efa ny anjely laharana, ary izy no tsy niala tamin'ny fitandremana masina; ary na dia mivavaka irery, dia manana ny amboarampeo ny olona masina teo aminy " (Stromateis 7:12).
Talohan'ny nahafatesany teo amin'ny kianja filalaovana, Saint Perpetua (D. 203) nitantara ny fahitana ny lanitra izay nifanena izy ny fanahin 'ny maritiora sy nahita anjely sy ny loholona nivavaka teo anoloan'ny seza fiandrianana' Andriamanitra (jereo Ny fampijalijaliana ny Olomasina Perpetua sy Felicitas 4:1-2). Origène nanoratra tao amin'ny 233, "Tsy fotsiny ny Mpisoronabe izay mivavaka amin'ny olona tena mivavaka, fa koa ny anjely ..., ary koa ny fanahin'ny olona masina izay efa nodimandry " (On Vavaka 11:1). In 250, Saint Cyprien ny Carthage namaritra ny fomba ny Eokaristia dia efa naterina ho fanomezam-boninahitra ny maritiora ny tsingerintaona fankalazana ny maty (jereo Taratasy ho ny mpitondra fivavahana sy ny vahoakany rehetra 39:3).
Na izany aza, ny fivavahana amin ny Olomasina toa Protestanta mba hanimba ny anjara asan'i Jesosy tsy manam-paharoa toy ny "iray no Mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona" (Jereo Paoly Taratasy Voalohany ho An'i Timoty 2:5).
Na izany aza, in niantso an'i Jesosy ny hany Mpanalalana amin'Andriamanitra, Saint Paul dia tsy miresaka momba ny vavaka fanelanelanana, fa ny Sorompanavotana. Satria i Jesosy dia sady Andriamanitra sy ny olona, ny fahafatesany ihany no nanana ny fahefana hampihavana antsika amin'ny Ray (jereo ny nandimby andininy ao anatin 'ilay taratasy: 2:6). Ny fanelanelanana ny Olomasina, na ny fanelanelanana ny Kristianina eto an-tany noho izany zavatra izany, tsy hanelingelina Kristy iombonana fanelanelanana eo anatrehan'ny Ray, fa mitaona aminy. Noho izany i Paoly, ao amin'ny andalana teo aloha andininy 2:5, Mampirisika ny Kristianina mba hanao ny vavaka fanelanelanana, izay "tsara, ary ... no ankasitrahana eo imason'Andriamanitra, Mpamonjy antsika " (2:1 – 3).
Ireo Olomasina dia tsy vato misakana ny fanompoana an'i Jesosy, fa ohatra velona ny Tompo dia nanome mba hampianatra antsika ny fomba hanompo Azy tanteraka. Araka ny Reny Angelica, foundress ny Mandrakizay Teny Fahitalavitra Network (EWTN), mazava nataony, "Izaho dia Franciscan, izay midika hoe: Izaho an'i Jesoa araka ny ohatry ny lehibe François d'Assise " (amin'ny Christine Allison, valiny, tsy Fampanantenana, Ignatius Press, 1996, t. 15).
Noho izany dia manontany: inona ray tsy Faly be ny mahita ny zanany voninahitra? Tsy fanajana ny zaza ankapobeny kokoa ny fanajana lalina fomba ny ray (jereo ny Bokin'ny Ohabolana 17:6)? Ny Fiangonana dia tsy hanandratra ny Olomasina noho ny aminareo, fa noho ny Andriamanitra nahary azy, nohamasininy, ka nanangana azy teo anoloantsika.
Izany Vavaka, tsy Fivavahana!
Toy izany koa, Katolika ny Protestanta matetika diso vavaka ny Olomasina toy ny fanompoam-pivavahana. Izany dia avy amin'ny fiheverana diso fa ny vavaka sy ny fanompoam-pivavahana dia mitovy dika.
Raha ny vavaka dia ampahany amin'ny fanompoam-pivavahana, fanompoam-pivavahana amin'ny ankapobeny dia ahitana ny fanatitra ny sorona (jereo Fifindra 20:24, Malakia 1:11; ary Paoly Taratasy ho an'ny Hebrio 10:10).
manokana, ny Fiangonana dia manolotra ny Sorona ny Eokaristia ho an'Andriamanitra, ary ho azy irery ihany, ao amin'ny Holy Mass. Mifanohitra amin'izany kosa, Katolika dia tsy manolotra fanatitra tamin'ny Olomasina. Raha ny tena izy, dia mety gaga mpitsikera ny mahafantatra fa ny Fiangonana dia nomelohin'i ambaratongam-pahefana ny fivavahana tamin'ny taonjato fahefatra ho an'ny tafahoatra momba ny Virjiny Mary. Saint Epiphanius, ny Eveka ny Salamisy, dia niteny mafy ny sekta fantatra amin'ny anarana hoe ny Kollyridians sorona noho ny fanatitra hanina ho azy (Panarion 79). ny famakiana izany, Diso hevitra ilay vehivavy sasany mety hanatsoaka hevitra fa tsy maintsy ho ankapobeny Epiphanius tsy ankasitrahan'ny an'i Maria fanoloran-tena. To ny mifanohitra, na izany aza, Epiphanius kafanam-po ny mampiroborobo ny Fiangonana ny fampianarana tao amin'ny Maria ao amin 'ny asa izay mananatra ny Kollyridians.
Manavaka ny fanompoana an'Andriamanitra sy ny fankamasinana ny Olomasina, Augustin nindramina avy amin'ny teny grika ny teny latria ary Eny, ny teo aloha ny hamaritana ny fanompoana an'Andriamanitra sy ny farany mba hilazana fankamasinana ny Olomasina (jereo Ny City 'Andriamanitra 10:1).
Manaja ny Olomasina isika, satria izy ireo no nohamasinina noho Andriamanitra.
Efa matetika azon'ny Kristianina rehetra fa dia miray amin'ny hafa amin'ny alalan'ny vavaka (jereo Saint Paul ny Taratasiny ho an'ny Romanina 12:5 ary ny taratasiny voalohany ho an'ny Korintianina. 12:12).
Toy ny olombelona mihitsy fanahy, io vavaka-rohy mety maty, fa ny fahafatesana dia manan-kery "ny hampisaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy Tompontsika" (indray, Jereo Paoly Taratasiny ho an'ny Romanina 8:38-39). Ireo izay maty ao amin'ny fisakaizana amin'Andriamanitra dia tsy "matory" ao am-pasana, fa hiara-manjaka aminy any an-danitra.[1. Ny mahazatra ara-Baiboly momba ny maty ho "matory" (jereo Matthew, 9:24, et al.) tsotra izao ny fomba ny maneho ny mandalo fahafatesana toetra sy tsy maintsy manao manokana ny vatana ny maty, tsy ny fanahy (Matthew 27:52). Ny tena mitoetra ao am-pasana rehefa maty ny fanahy raha miditra ao mandrakizay. Tamin'ny Fitsarana Farany, ny vatana nitsangana tamin'ny maty, ary tafaray indray ny fanahy. Satria tsy ny Kristianina Katolika mirona hahita ny maty toy ny natory, vavaka ho an'ny Olomasina toa azy ireo ho amin'ny teny Karazana sikidy (jereo ny Bokin 'Deuteronomy 18:10-11 ary ny Bokin 'i Samoela Voalohany, 28:6). Fa Karazana sikidy araka ny tokony ho nahafantatra ny ezaka hitsimpona vaovao avy any amin'ny maty, izay raha tsy izany dia an'Andriamanitra irery ihany, toy ny fahalalana ny ho avy. Vavaka ho an'ny Olomasina, etsy ankilany, dia mitady any an-danitra fotsiny fanelanelanana. ↩